जीवनको रहस्य ! आकर्षणको कानून – SaipalNews.com
जीवनको रहस्य ! आकर्षणको कानून
काठमाडौँ १५ असार । के तपाईंले कहिल्यै याद गर्नुभयो कि यो संसार पूर्णताका लागि बनाइएको हो ? त्यहाँ प्रत्येक चीजको लागि एक कारण र प्रयोग छ जुन तपाईं यो ग्रहमा देख्न, स्वाद, स्पर्श, सुन्न र महसुस गर्न सक्नुहुनेछ । सबै कुरा काम गर्दछ र सही सद्भाव मा एक साथ फिट । हाम्रो शरीरको प्रकार्य र आकारहरूदेखि लिएर सानो उद्देश्यका लागि एक उद्देश्यका साथ वरिपरि दौडँदै ।सूर्य जीवनको लागि सूर्यसँग पृथ्वीको नजिक छ र हामीसँग एक चन्द्रमा छ, जसले हामीलाई घाम डुब्दा हामीलाई पर्याप्त प्रकाश दिन्छ ।
हाम्रो वरिपरि यी सबै पूर्णतासँग, के कारण हामीलाई लाग्छ कि परमेश्वरले संसारलाई अन्याय गर्नुभयो ? वास्तवमा, केहि पनि अन्यायपूर्ण छैन । यो संसार पूर्ण रूपमा बनाइएको थियो र एक सय प्रतिशत सबैको लागि निष्पक्ष थियो, जसरी यो बनाइएको थियो कि यसमा सबै कुरा पुरानो हजुरबुबा घडी भित्र एकसाथ काम गर्दछ।
म कसरी त्यस्तो कुरा भन्न सक्छु जब हामीहरु मध्ये केही गरीबीमा जन्मन्छौं र कोही आर्थिक सम्पत्तीमा जन्मन्छौं ? म यो भन्छु किन यो ब्रह्मण्ड आकर्षण को व्यवस्था समावेश गर्न बनाइएको थियो। आकर्षणको कानूनको साथ पृथ्वीमा प्रत्येक मानवसँग उनीहरूको जीवन ठीक तरीकाले उनीहरूले चाहे जस्तै सृष्टि गर्न समान क्षमता रहेको छ ।
तपाईं कहाँ जन्मनुभयो भन्नेले फरक पार्दैन, तपाईंको परिवारको कति पैसा छ, तपाईं स्कूलमा असल हुनुभएको होस् वा तपाईं खुट्टा र हातहरू सहित जन्मनुभएको थियो ।सबैलाई आकर्षणको कानूनको साथ जन्म भएको थियो र यसले सम्पूर्ण मानवजातिको लागि समान काम गर्दछ । हो, त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौं ।
यदि तपाईं कुनै खुट्टा र कुनै हतियारको साथ जन्मेको हुनुहुन्छ भने तपाईंले सजीलै बढ्न सक्नुहुन्न । जहाँसम्म, यस्तै परिस्थितिमा जन्मेका मान्छेहरूले अझै पनि उहाँलाई दिइएको कुराको अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्दछन् । आकर्षण को कानून प्रयोग गरेर हामी सबै अरू कुनै जस्तै सक्षम छौं । हाम्रो सपना को जीवन शैली बनाउन।
यदि तपाईंले आकर्षणको कानूनको बारेमा अझै सुनेका छैनन् भने, तयार हुनुहोस् । यो जीवनको रहस्य हो। कसै-कसैले विश्वास गर्छन् कि आकर्षण को व्यवस्था मात्र एक सिद्धान्त हो। यो वास्तवमै सत्यबाट हुन सक्दैन। सापेक्षता को कानून र गुरुत्वाकर्षण को कानून जस्तै, आकर्षण को कानून पनि हामी अस्वीकार गर्न सक्दैन कि एक प्रमाणित यूनिवर्सल कानून हो।
आकर्षण को व्यवस्था
आकर्षणको कानूनले भन्छ कि हामी चीजहरू, घटनाहरू, परिस्थितिहरू र व्यक्तिहरू सिर्जना गर्दछौं जुन हाम्रो जीवनमा हाम्रो विचार र भावनाहरू द्वारा आउँदछ। यसको मतलब यो हो कि हामीसँग गर्न सकिन्छ, गर्न सक्छौं वा केहि बन्न सक्छौं जुन हामीले हाम्रो विचारहरूलाई सकारात्मक तरीकाले प्रयोग गरेर छान्दछौं।
फ्लिप पक्षमा, किनकि यस विश्वव्यापी कानूनको वरिपरि कुनै तरिका छैन, उल्टो पनि सहि छ । हामी ब्रह्मण्डमा बाहिर पठाइएको बिचार र भावनाहरूद्वारा हामी आफ्ना प्रत्येक नकारात्मक परिस्थितिहरू पनि सिर्जना गर्दछौं।यो एक विचार, सिद्धान्त वा के हो भने हैन। यो जीवनको कानून हो जुन प्रत्येक मानव जीवनको साथ हुन्छ । यो त्यस्तै तथ्यको लागि कुनै पनि अन्य सार्वभौमिक कानूनको जस्तो छ कि यसलाई बेवास्ता गर्ने कुनै उपाय छैन र यसलाई परिवर्तन गर्ने कुनै तरिका छैन । यो केवल यो के हो ।
त्यहाँ एउटा तरिका छ, आकर्षण को व्यवस्था सबै अरू भन्दा फरक छ। आकर्षण को कानून एक र एक मात्र सार्वभौमिक कानून हो जुन हामीसँग नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता छ। हामी कारण र प्रभावको संसारमा बाँचिरहेका छौं। हामीसँग प्रत्येक विचार र भावनाको साथ यसले असर गर्छ।त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन् जुन हामी आफ्ना विचारहरू प्रयोग गर्न सक्छौं। पहिलो हो कि हामी त्यसलाई अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछौं, जसले परिणामस्वरूप हाम्रो सोचाइ र भावनाहरूले कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्नेमा कुनै सचेत हुन सक्दैन।
वा, हामी हाम्रो भावनाहरूमा नियन्त्रण गर्न सिक्न सक्छौं हाम्रो जीवनमा चाहेको सकारात्मक प्रभावहरूलाई बल गर्न। अन्य विश्वव्यापी कानूनहरू जस्तै, आकर्षणको कानूनमा कसरी काम गर्दछ भन्ने बारे नियमहरू छन्। जब हामी यी नियमहरू कसरी काम गर्छौं सिक्छौं, हामी यो कानूनलाई हाम्रो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सक्दछौं र जीवन सिर्जना गर्न सक्दछौं जुन हामी अन्यथा सपना मात्र देख्ने गर्दछौं।
धेरै व्यक्ति आकर्षण को कानून को बारे मा जान्न को लागी मात्र अधिक पैसा कमाउन को लागी, र त्यो ठीक छ। तर तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ आकर्षणको नियमले तपाईंलाई तपाईंको जीवनको हरेक पक्षमा सहयोग गर्न सक्छस पैसा, शक्ति, प्रसिद्धि, सम्बन्ध, प्रेम, तपाईंलाई आवश्यक श्रोतहरू खोज्ने, तपाईंको प्रतिभामा अधिक कुशल हुँदै बढि बढि।
यो पुस्तक समाप्त गरेपछि, म तपाईंलाई आग्रह गर्दछ कि आकर्षणको कानूनको यो अनमोल उपहारको पूरा फाइदा लिन। यसलाई तपाईंको जीवनको सबै क्षेत्रहरूमा प्रयोगको लागि राख्नुहोस्। कोर्स को वित्तीय धन को लागी भने प्रयोग गर्नुहोस्। सबैजना आर्थिक तवरमा धनी हुन चाहान्छन् तर त्यहाँ नरोकिनुहोस्। यसलाई तपाईले चाहानु भएको चीजहरू प्राप्त गर्न मात्र प्रयोग गर्नुहोस्, तर यसलाई प्रयोगको लागि पनि प्रयोग गर्नुहोस् ।
ब्रह्मण्डको गुप्त शक्ति अंग्रेजी पस्तकबाट अनुमोदन = गोविन्द कुँवर -भाग १ बाँकी अर्को अंशमा ।
झण्डै एक महिनापछि नेकपा सचिवालय बैठक शुरु
उपत्यकामा एकैदिन थपिए ६ सय १८ कोरोना संक्रमित
धादिङमा दुर्घटना बीस घाइते, ६ काे अवस्था गम्भीर
लोसपा नेपालको पार्टी कार्यालय स्थापना
निषेधाज्ञा लागू भएसँगै उपत्यकाको जनजीवन ठप्प
काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन एक दिन पनि सर्दैन भदौमै हुन्छ : देउवा
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश कि केन्द्रको ?
किजा पूजामा सार्वजनिक विदा
नेपालको झण्डा राखेर पानी जहाज चलाउने तयारी
युएईमा आजदेखि नेपालीलाई प्रवेश खुला